အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးမြားကို ဘာကွောငျ့ မနမျးရှုံ့သငျ့တာလဲ - ONE DAILY MEDIA
အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးမြားကို ဘာကွောငျ့ မနမျးရှုံ့သငျ့တာလဲ
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ လူအမြားစုဟာ သူတို့ရဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးမြားကို မိသားစုဝငျတဈဦးကဲ့သို့ သဘောထားကာ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ထို့အရာဟာ ကောငျးသျောလညျး မိမိတို့အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေူမြားအား အခဈြပိုကာ နမျးရှုံ့ခွငျးဟာ အမှနျတကယျတမျးမှာ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျမှုရှိပါမညျလား??
ယခုတဈခါမှာတော့ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျလေးမြားကို နမျးရှုံ့ပှဖေ့ကျခွငျးမြား၏ နောကျကှယျမှ အန်တရာယျရှိသော ကနျြးမာရေးဗဟုသုမြားကို ဂရုပွုနိုငျစရေနျ တငျပွပေးလိုပါတယျ။
(၁) ခှေးမြား၏ နုတျသီး ၊ ပါးစပျမြားဟာ သနျ့ရှငျးမှု ရှိပါသလား??
Chicken Soul for the soul of the Dog Owner စာအုပျ ကိုရေးသားသူ Marty Becker က ” မငျးသခြောကွညျ့ ၊ သခြောအနံ့ခံကွညျ့ပွီးရငျ မငျးဒါကိုနားလညျသှားမှာပါ ၊ သူတို့က အမှိုကျပုံးတှကေို လိုကျကိုကျဆှဲတယျ ။ ပွီးတော့ ငါတို့လူခငျြးနုတျဆကျရငျ ပါးခငျြးကပျလရှေိ့သလို သူတို့ခှေးခငျြးနုတျဆကျရငျ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျး အစိတျအပိုငျးမြားကို အခငျြးခငျြးနမျးရှုံ့လရှေိ့ကွတယျ ” လို့ အဆိုပါအပွုအမူအပျေါ ရှငျးပွပါတယျ။
(၂) ခှေးမြား၏ သားရညျအတှငျးပိုးမှားမြားပါဝငျမှု
လနျဒနျရှိ Queen Mary တက်ကသိုလျမှ ရောဂါဗဒေနှငျ့ ဘကျတီးရီးယားဗဒေ ပါမောက်ခဂြှနျအောကျဈဖို့ဒျက ခှေး၏ပါးစပျနှငျ့ခံတှငျး၌ဘကျတီးရီးယားမညျမြှသယျဆောငျနိုငျသညျနှငျ့ ပတျသကျ၍ ‌ပွောကွားရာမှာတော့ စှနျ့ပဈပစ်စညျးမြား ၊ အညဈအကွေးမြား အကွား လှညျ့ပတျနသေညျ့ သူတို့၏ပါးစပျမြားဟာ ဘကျတီးရီးယား၊ ဗိုငျးရပျဈမြားနှငျ့ပိုးမှားမြားအပွညျ့ရှိနကွေောငျး ရှငျးပွပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
(၃) ပိုးမှားမြားလူ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရောကျရှိခွငျး၏ ဆိုးကြိုးမြား
ဤဗိုငျးရပျဈမြားနှငျ့ပိုးမှားမြားဟာ လူသားတို့အတှကျ မြားစှာသော ကနျြးမာရေးပွဿနာမြားဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ခှေးလေးရဲ့တံတှေးကနေ တဆငျ့ ပိုးမှားကူးစကျသှားသူ ဗွိတိနျအမြိုးသမီးတဈ ဦးရဲ့ အဖွဈအပကျြကတော့ သူမစကားပွောသံမြား ပိုပိုပွီးလေးလံလာသညျကိုစတငျသတိထားမိလာပွီးနောကျ သှေးစဈခကျြမြားအရ သူမဟာ ခှေးမြားနှငျ့ကွောငျမြား၏ပါးစပျ၌တှရေ့လရှေိ့သော capnocytophaga canimorsus ဘကျတီးရီးယားပိုးကွောငျ့ကူးစကျခံထားရကွောငျး သိရှိခဲ့ရပါတယျ။ ဗွိတိနျတဈဝှမျးတှငျလညျး အလားတူဖွဈရပျမြိုး ၁၃ မြိုးရှိခဲ့ပါတယျ။
(၄) အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးမြားမှတဆငျ့ အခွားကူးစကျနိုငျသောရောဂါမြား
ပှေးဟုချေါသညျ့ ယားနာရောဂါမှာ သငျ၏ခှေးကိုနမျးခွငျးမှရနိုငျသော အမြားဆုံး တှရေ့သညျ့ရောဂါပိုးမြားထဲမှတဈခုဖွဈပါတယျ။သငျရဲ့အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျက ယားနာရောဂါပိုး ကူးစကျခံရပွီး သူတို့ကိုနမျးခွငျး‌ဖွငျ့ သငျပါ ကူးစကျခံရနိုငျပါတယျ။
MRSA ကူးစကျမှုဟာ အမြားအားဖွငျ့အရပွေားကို ထိခိုကျပွီးအမြားအားဖွငျ့ လြှာဖွငျ့တဈခကျြအယကျခံရရုံဖွငျ့ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
Capnocytophaga сanimorsus ဘတျတီးရီးယား ကတော့ ပေါကျပွဲဒဏျရာမြားမှတဆငျ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျတှငျးဝငျပွီး ဆိုးရှားသောကနျြးမာရေးပွသနာမြားဖွဈစနေိုငျသောဘကျတီးရီးယားတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
-သငျ့အိမျ‌မှေးတိရိစ်ဆာနျမြားကိုနမျးခွငျး ၊ သငျ့မကျြနှာကို လြှာဖွငျ့လကျြစခွေငျး ၊ သငျ့ထမငျးစား စးပှဲပျေါအသာကြှေးခွငျး ၊ အတူမြှဝစေားသောကျခွငျး တို့ကို ရှောငျကွဉျရပါမယျ။
-အဖွဈမြားသောရောဂါမြားအတှကျ ကာကှယျဆေးထိုးပါ ။
-အမှေးပှကောငျကွီးမြားအတှကျ antibacterial နှငျ့ antifungal shampoo မြားကိုသုံးပါ။
-သငျ့ခှေး (သို့) ကွောငျအား အခွားလလှေငျ့တိရစ်ဆာနျမြားနှငျ့ အထိအတှမေ့ရှိစရေနျ ဂရုပွုပါ။ လမျးလြှောကျထှကျစဥျ လမျးပျေါမှာ တှကေ့ရာမစားစရေနျ သငျပေးပါ။
-အသား၊ ငါး ၊ ကွကျဥမြားကို အစိမျးမကြှေးရပါ။
-အစာကြှေးသောပနျးကနျ နှငျ့နထေိုငျရာ နရောမြားကို ပိုးသတျဆေးရညျတို့ဖွငျ့ ပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ။
-အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျ‌ လေးမြား နမေကောငျးခွငျး ၊ အစာစားရနျငွငျးဆနျခွငျး (သို့) အစာမ‌ကွပြေို့အနျခွငျး မြားခံစားနရေပါက တိရစ်ဆာနျဆရာဝနျအားခကျြခငျြးပွသရပါမယျ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးများကို ဘာကြောင့် မနမ်းရှုံ့သင့်တာလဲ
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးများကို မိသားစုဝင်တစ်ဦးကဲ့သို့ သဘောထားကာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ထို့အရာဟာ ကောင်းသော်လည်း မိမိတို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေူများအား အချစ်ပိုကာ နမ်းရှုံ့ခြင်းဟာ အမှန်တကယ်တမ်းမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုရှိပါမည်လား??
ယခုတစ်ခါမှာတော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများကို နမ်းရှုံ့ပွေ့ဖက်ခြင်းများ၏ နောက်ကွယ်မှ အန္တရာယ်ရှိသော ကျန်းမာရေးဗဟုသုများကို ဂရုပြုနိုင်စေရန် တင်ပြပေးလိုပါတယ်။
(၁) ခွေးများ၏ နုတ်သီး ၊ ပါးစပ်များဟာ သန့်ရှင်းမှု ရှိပါသလား??
Chicken Soul for the soul of the Dog Owner စာအုပ် ကိုရေးသားသူ Marty Becker က ” မင်းသေချာကြည့် ၊ သေချာအနံ့ခံကြည့်ပြီးရင် မင်းဒါကိုနားလည်သွားမှာပါ ၊ သူတို့က အမှိုက်ပုံးတွေကို လိုက်ကိုက်ဆွဲတယ် ။ ပြီးတော့ ငါတို့လူချင်းနုတ်ဆက်ရင် ပါးချင်းကပ်လေ့ရှိသလို သူတို့ခွေးချင်းနုတ်ဆက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အချင်းချင်းနမ်းရှုံ့လေ့ရှိကြတယ် ” လို့ အဆိုပါအပြုအမူအပေါ် ရှင်းပြပါတယ်။
(၂) ခွေးများ၏ သားရည်အတွင်းပိုးမွှားများပါဝင်မှု
လန်ဒန်ရှိ Queen Mary တက္ကသိုလ်မှ ရောဂါဗေဒနှင့် ဘက်တီးရီးယားဗေဒ ပါမောက္ခဂျွန်အောက်စ်ဖို့ဒ်က ခွေး၏ပါးစပ်နှင့်ခံတွင်း၌ဘက်တီးရီးယားမည်မျှသယ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ‌ပြောကြားရာမှာတော့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၊ အညစ်အကြေးများ အကြား လှည့်ပတ်နေသည့် သူတို့၏ပါးစပ်များဟာ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပိုးမွှားများအပြည့်ရှိနေကြောင်း ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၃) ပိုးမွှားများလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောက်ရှိခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
ဤဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပိုးမွှားများဟာ လူသားတို့အတွက် များစွာသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခွေးလေးရဲ့တံတွေးကနေ တဆင့် ပိုးမွှားကူးစက်သွားသူ ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတစ် ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ သူမစကားပြောသံများ ပိုပိုပြီးလေးလံလာသည်ကိုစတင်သတိထားမိလာပြီးနောက် သွေးစစ်ချက်များအရ သူမဟာ ခွေးများနှင့်ကြောင်များ၏ပါးစပ်၌တွေ့ရလေ့ရှိသော capnocytophaga canimorsus ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဗြိတိန်တစ်ဝှမ်းတွင်လည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ၁၃ မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
(၄) အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးများမှတဆင့် အခြားကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ
ပွေးဟုခေါ်သည့် ယားနာရောဂါမှာ သင်၏ခွေးကိုနမ်းခြင်းမှရနိုင်သော အများဆုံး တွေ့ရသည့်ရောဂါပိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်က ယားနာရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး သူတို့ကိုနမ်းခြင်း‌ဖြင့် သင်ပါ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
MRSA ကူးစက်မှုဟာ အများအားဖြင့်အရေပြားကို ထိခိုက်ပြီးအများအားဖြင့် လျှာဖြင့်တစ်ချက်အယက်ခံရရုံဖြင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
Capnocytophaga сanimorsus ဘတ်တီးရီးယား ကတော့ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများမှတဆင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဝင်ပြီး ဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးပြသနာများဖြစ်စေနိုင်သောဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
-သင့်အိမ်‌မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုနမ်းခြင်း ၊ သင့်မျက်နှာကို လျှာဖြင့်လျက်စေခြင်း ၊ သင့်ထမင်းစား စးပွဲပေါ်အသာကျွေးခြင်း ၊ အတူမျှဝေစားသောက်ခြင်း တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
-အဖြစ်များသောရောဂါများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ ။
-အမွှေးပွကောင်ကြီးများအတွက် antibacterial နှင့် antifungal shampoo များကိုသုံးပါ။
-သင့်ခွေး (သို့) ကြောင်အား အခြားလေလွင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့် အထိအတွေ့မရှိစေရန် ဂရုပြုပါ။ လမ်းလျှောက်ထွက်စဉ် လမ်းပေါ်မှာ တွေ့ကရာမစားစေရန် သင်ပေးပါ။
-အသား၊ ငါး ၊ ကြက်ဥများကို အစိမ်းမကျွေးရပါ။
-အစာကျွေးသောပန်းကန် နှင့်နေထိုင်ရာ နေရာများကို ပိုးသတ်ဆေးရည်တို့ဖြင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
-အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်‌ လေးများ နေမကောင်းခြင်း ၊ အစာစားရန်ငြင်းဆန်ခြင်း (သို့) အစာမ‌ကြေပျို့အန်ခြင်း များခံစားနေရပါက တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်အားချက်ချင်းပြသရပါမယ်